On blog ah, waxaan ka hadli doonaa wax kasta oo i xiiso leh shaqada.
Waxyahaygu waa talooyinka, kiisaska la taaban karo ee mowduucyada sida, qalabka xafiisyada, barashada luqadda, waxsoosaarkooda iyo wax kasta oo ka soo horjeeda horumarka xirfadeed.
Baro inaad ku qorto warbixinta, maababka gaaban ee Ereyga, maareeyaan saaxiib isku mid ah ... Kuwani waa mowduucyada aan go'aansaday inaan wax ka hadlo oo aan rajeynayo inaan ku badbaadin doono waqti.
Si aad u badbaadiso waqtiga shaqada iyo guriga adigoo iska ilaalinaya tababarka aan dhamaadka lahayn iyo tababarka mawduucan waa mudnaan ii ah.
Waxaan fursad u helayaa inaan u mahadnaqo dhammaan kuwa ka mid ah kooxda aan rasmiga ahayn iyo kuwa iga caawiya inaan kuu soo bandhigo alaab tayo leh.
Hase ahaatee, waan ku soo dhaweynayaa bloggeyga, haddii aad hayso wax soo jeedin ama hadal ah si aad iiga dhigto? Ha ka waaban inaad la soo xiriirto.
Si dhakhso ah u arag.